Jikọọ ọrụ WhatsApp maka Ọrụ na Dubai, Ọrụ, Na-achọ na UAE
Jikọọ Group Group WhatsApp
Ezigbo obodo na WhatsApp na Dubai
Jikọọ WhatsApp Group maka Ọrụ na Dubai. Nnọọ expats obodo maka oru na Gulf. Y’oburu n’acho inweta oru. Companylọ ọrụ ndị na-ewe ndị ọrụ n'ọrụ nọ ebe a ọrụ na Europe. Ndị otu anyị ọkachamara maka ohere ọrụ. Emeela ka ọtụtụ ndị dị iche iche dị na Gulf na Gulf. Anyị bụkwa ndị na-ewu ewu na ebe nrụọrụ weebụ na UAE maka ịchọta WhatsApp ọrụ na gulf. Ị hụtụrụla n'onwe gị Dubai City Òtù WhatsApp. N'okpuru ọnọdụ ndị ahụ, ọ bụla Ụmụnna WhatsApp kekọrịta onyinye dị ugbu a na UAE. Na ahịa mbanye agbanweela na Dubai. Sitesbọchị ndị ọrụ ụbọchị a anaghị enye gị nkwa na ha na-enwe oghere ọrụ na Dubai City.
Jikọọ WhatsApp Group maka Ọrụ na Dubai!
Ọrụ Facebook Facebook bụ otu kachasị mma maka ndị na-achọ ọrụ na Dubai. Bụrụ onye ọrụ obi ụtọ na ọrụ anyị na Dubai. Anyị na-amalite njikọ Otu maka ndị na-achọ ọrụ WhatsApp na Middle East. WhatsApp bụ otu n’ime ndị mgbasa ozi na-ewu ewu kachasị ama ama ngwa. Ezubere maka ndị na-achọ ijikọ ndị ọzọ. Emepụtara ụlọ ọrụ Dubai City ìgwè ekwentị mkpanaka maka ndị ọpụpụ.
Ọrụ ekwentị mkpanaaka na Dubai
Jikọọ Ahịa Group maka ọrụ na Dubai
N'ebe dị mma, ebumnuche anyị bụ ijikọ ndị si n'akụkụ ụwa nile. Na-ewu onye kachasị achọ ọrụ na UAE. Soro n’otu obodo nke ndị na-achọ ọrụ ekwentị ma jikọta na ihe karịrị nde mmadụ na saịtị anyị. N'okpuru ọnọdụ ndị ahụ, ịnwere ike ịkekọrịta CV na akwụkwọ ozi mkpuchi nye ndị na-ahụ maka ọrụ na UAE. Ị nwere ike juo ha gbasara echiche. Ọzọkwa, otu esi ahọputa maka oghere na Middle East. Anyị ekepụtala otu ihe karịrị ndị ọrụ 20 dị iche iche emebere karịsịa na ngalaba ịchọ ọrụ ọrụ maka Dubai.
Nke a bụ “WhatsApp na Dubai”. Otu ekwentị mkpanaaka nke WhatsApp naanị maka ịkekọrịta ọrụ ndị a na-enye. Site na njirimara ọhụrụ anyị, ị ga-enwe ike itinye nọmba ekwentị nke WhatsApp na obodo anyị. Otu a anyị na - enye gị ka aga - akpọ gị ka ha rụọ njikọ dị mfe iji chọta ndị enyi ọhụrụ yana ndị isi ndị na - ewe ndị ọrụ maka wee mee ka ha bụrụ ndị otu. Dịka ọmụmaatụ, enwere ọtụtụ Indians ke Kuwait na Dubai City. Maka Dubai na ebe UAE ka bu ihe kacha mma maka ndi ozo. N'ihe gbasara nyocha ọrụ maka ndị ga-eme ihe omume, anyị bụ enyere aka ịkwaga Dubai.
Ònye nwere ike sonyere HR WhatsApp otu?
Ndị ọrụ na ndị na - ahụ maka ọrụ na HR na UAE: Iji kere òkè mmeghe ọrụ.
Ndị na-achọ Job: Ịchọta ọrụ ụlọ ọrụ na Dubai.
Ndị mmadụ achọ ọrụ na Dubai 2018 na 2019
Ndị ọkachamara na-achọ ọrụ na Dubai: ha nwere ike ịkekọrịtaghachi na resume ahụ na ndị ọrụ nchịkọta.
Onye ọ bụla na-enweghị mmasị ịdenye aha n'ịntanetị ma na-achọ otu pịa ka ijikọ ya na ndị njikwa ego.
Ndị isi HR: iji nweta onyinye a ugbu a & onye ọ bụla chọrọ ịnwe njikọ.
Ndị na-achọ Job bụ ndị enwe mmasị na isi obodo ahụ na ịchọ ọrụ na Dubai.
Iji sonyere ọnụ ọgụgụ ekwentị gị dị n'okpuru WhatsApp Group.
Ndị na-achọ ọrụ na Gulf bụ ndị ga-achọ ijikọta na ndị ọrụ ọrụ.
Ndị si mba niile si United Arab Emirates kwụrụ ụgwọ.
Anyị WhatsApp ịtụnanya nchịkọta dị iche iche WhatsApp ọrụ dị iche iche. N'ebe dị mma na-enyere ọtụtụ ndị isi aka inweta ọrụ ka mma. Zute ọhụrụ WhatsApp ndị enyị na-achọ ọrụ na Gulf na ịkpọtụrụ ha kwa ụbọchị. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ị maghị onye ga-enyere gị aka ịchọta ọrụ ị ga-arụ. Ma ọ bụ ọbụna zitere gị ụfọdụ ndụmọdụ maka ịchọ ọrụ. WhatsApp dị mma maka Emirates ọrụ ohere ị nwere ike ịmalite ha ugbu a. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị na-achọ ọrụ ná mba ọzọ. I kwesịkwara ilebanye anya na ụlọ ọrụ ịgba ụgwọ. Ụlọ ọrụ kacha mma na Careerjet na Dubai na Ọfọn ama ama ọbọde utom utom ke obot Monster. Ha bara ezigbo uru itinye ya na Resume gị.
Jikọọ Gulf Jobs WhatsApp Groups
Echefula ọrụ gị na UAE
Ịdọ aka ná ntị maka ndị ọrụ ọhụrụ na United Arab Emirates. A na nso nso a site na Huffington post agha ọhụrụ expatriates Ọ dịtụghị mgbe ị na-eche banyere ịhapụ ọrụ gị na UAE! Karịsịa ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-achọ ọrụ Indian, ịkwesịrị ịkpachara anya. Ọ bụrụ n’ị na-achọ ịbụ onye ọrụ nke ezigbo ụlọ ọrụ na United Arab Emirates. Mkpa ka onye ma ihe mara ma mara otu esi ejikwa ya nke ọma.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ohere na Dubai City. Mgbe ị nọ ileta na ịchọ ọrụ na visa nleta. Ọ bụ ezie na ịnọ n’èzí ụlọ obodo dịka ọmụmaatụ India. Ma nweta ọrụ a na-enweta ọhụrụ site na ụfọdụ ụlọ ọrụ dị n'India. Na a ọrụ dị mma nke na ọ kwesịrị ịgbalị ịbawanye ụzụ. Yabụ ọ bụrụ na ịlaghachi India. I we zigharịrị onye ọrụ ọchụnta nke akwụkwọ mkpesa nke akwụkwọ mkpesa na ụlọ ọrụ Dubai, na nnabata akwụkwọ ozi arụkwaghịm Y’oburu na onye were gi n ’oru gha iziga onye oru. Na ịhapụla UAE iwu na-akwadoghị, mgbe ịlaghachite, enwere ike ijide gị.
Jikọọ Group Group WhatsApp maka Ọrụ na Dubai!
Ihe ngosi ohuru nke 2020 na ohere oru
Ọrụ ọhụrụ ahụ na-achịkọtara ọnụ na Ọwara. Ọrụ ọhụụ na-abata uru nke Expo 2020 na Dubai. Gọọmentị metụtara ọrụ mmepe gbasara ọrụ. Emeela mepee ọrụ ọhụrụ maka ndị nwere mmụta MBA. N'akụkụ dị mma, mmepe UAE ọhụrụ na-abịa. Dika eziokwu, oru Mbula ahia abaala ijeri $ 33 ijeri ego, dị ka akụkọ ọhụrụ si na Dubai na Abu Dhabi kwuru peeji gọọmentị.
Onu-ego nke itinye ego maka Expo buru ibu. Karịsịa n'ihi itinye ego metụtara ọrụ. Expo ji nwayọ bia dịka UAE kacha mma. Naanị ọnụọgụ afọ atọ fọdụrụ maka ebe nyocha ọrụ zuru ụwa ọnụ. N'ezie, ihe omume a metụtara ọrụ ga-amalite na October 20, 2020. Ndị na-achọ ọrụ ọhụrụ natara arịrịọ ahụ. Maka nzube nke ịnweta ndụmọdụ banyere otu esi achọta ọrụ ahịa metụtara ọrụ na Dubai.
Na anyị Whatsapp netwọk ọrụ dịka maka ebe ndị Gulf nọ. ị nwere ike ịchọta ọrụ na Expo 2020. Ọzọkwa, nyocha ọhụụ nke oru ngo na-egosi na WhatsApp ga-emetụtakwa nke a. Eleghị anya ị na-eche maka etu ?. Ugbu a ahịa ekwentị ekwentị na-etolite na UAE. Lelee nke ọhụrụ Arab emojis n’elu igwe WhatsApp na-akparịta ụka. N'ime ngwa ngwa emelitere WhatsApp, ị nwere ike ime ọtụtụ. Ngwa ọgụgụ a na-eji ngwa ngwa na-ejikwa ndị isi ọgụgụ isi na ndị ọrụ metụtara ọrụ site na Facebook.
Na-egosi ọrụ metụtara ọrụ na WhatsApp
Onye wetara ya nke ohere ohuru na UAE. Ndi isi ndi isi ochichi kwuru na oru $ ijeri $ 33-35. Kama nke ahụ, gụnyere ọrụ maka ndị ọrụ Filipin na oru ndi ozo were ndị ọrụ South Africa na Dubai. Ya mere ọtụtụ ọhụụ mba ọhụrụ na-enweta site na ụgbọ mmiri njem. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịbụ eziokwu karịa 40,000 ọhụrụ ohere ga-enye maka ndị ọrụ ụwa na-achọ.
Igosipụta ọrụ na WhatsApp na-arụ ọrụ ọnụ. Ọzọkwa ọbụna na-eto eto kwa ụbọchị. N'ihi na ihe kariri ndị 200 ndị otu n'ime ndị ọrụ WhatsApp ga-ebu ọrụ maka iziga ozi gaa na ndị 55 ijeri ọrụ na ekwentị mkpanaaka kwa ụbọchị Nzukọ Gov World Govt oru ngo. Nzube a, WhatsApp ga-eto eto karịa otu ijeri ndị ọrụ n'otu ụbọchị. Nke ahụ ga-abụ nnukwu ihe iji rụọ ọrụ.
Arabicwa ndị Arab dị ka a ga - akpọkwa ndị agwakọta ọhụrụ maka ọrụ a pụrụ iches. Mana ikwuputaghi ebe obibi dị na Expo 2020. Ọrụ metụtara ọrụ a metụtara ọrụ azụmahịa. Yana ndị ọbịa ịbanye na oge ọrụ na Ngosipụta oru oru ohuru oru 2020 na Dubai. Ha nile biara n'otu n'ime ndị ọbịa ụwa niile na United Arab Emirates.
WhatsApp Group ke Dubai maka ndị mba ọzọ
Òtù WhatsApp dị mkpa karịa ndị ọrụ nkwukọrịta ndị ọzọ. WhatsApp Otu A na-enyere atụmatụ maka Ndị India na-achọ ọrụ na UAE iji chọta Ọrụ na Dubai. Ihe ọ bụla mere n'ụbọchị ndị a ijuanya na ọtụtụ ndị ọrụ dị mfe ma bụrụ ndị a pụrụ ịdabere na ya na-achọ ọrụ na Middle East. Ugbu a, ihe ka ọtụtụ n'ime ndị ọgbọ ahụ nwere ike ịbanye n'òtù ọrụ anyị. Ndị na-achọ Job chọrọ ịrụ ọrụ na Dubai.
N'aka nke ọzọ, onye ọ bụla nwere ike tinye maka ohere ọrụ na mba ọzọ. Ọzọ Na-eziga onwe gị CV na anyị mobile WhatsApp ozi. I kwesịghị ịga leta isi obodo nke UAE. Ndị anyị na-akpọ WhatsApp maka ndị ọrụ na UAE. Na-enye ndị ọbịa ọhụrụ aka na ndị ọrụ nhazi. Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịbụ eziokwu, n'eziokwu, onye ọ bụla nwere ike ghọọ onye na-abanye na United Arab Emirates.
Ọ bụrụ na ịchọọ ọrụ ka ị ga-amalite iji ozi WhatsApp. I kwesiri ime ya. Kwadebe Resume gị. N'ihi na n'ụbọchị ndị a anyị na-enyere ndị inyom na-achụpụ aka na Dubai. Ọzọkwa, mee ka akwụkwọ ozi mkpuchi dị egwu ọ nwere ike enyere gị aka ịdakwasị ohere ahụ. Yabụ na ị ga - enweta ihe niile n'aka gị. Jikọọ na ndị na-ewe ndị ọrụ na-arụ ọrụ na ọrụ WhatsApp na gas anyị. Jụọ ha maka ọrụ na Dubai.
Obodo UAE bụ gọọmenti etiti nke echiche ahia ahia nke obodo asaa. N'otu oge mgbe ị na-eme ya Ewelite WhatsApp, ị nwere ike ịgwa onye ọ bụla n ’ụwa niile okwu n’efu. N’ezie, enwere ndị mmadụ na WhatsApp. Onye ga n’ezie nyere gị aka n’ụzọ ọrụ ịchọ ọrụ na 7 Emirates?. Mana jiri sistemụ ekwentị anyị ga-adị mfe karị inweta ọrụ n'elu ekwentị mkpanaaka.
Whatsapp maka gam akporo Job na Dubai
Whatsapp maka gam akporo ugbu a na-ebute ihe karịrị 3 ijeri ndị mmadụ na mba 195. N'ikpeazụ, ihe karịrị ụlọ ọrụ 200 na-eji Ọnọdụ Whatsapp maka nzube nke ọrụ nbanye na Saud Arabia. Ugbu a ị nwere ike iji WhatsApp tinye kọntaktị na listi gị iji nọrọ na njikwa njikwa ọrụ mmadụ na Dubai. Site na ebumnuche a, ịnwere ike itinye nọmba ekwentị gị iji jikọọ na ndị na-ewe ndị ọrụ na Abu Dhabi.
Ekwu okwu na-amalite mkparịta ụka ekwentị n'oge ọ bụla na Dubai taa. Whatsapp ngwa maka mobile na Whatsapp maka windo abụghị naanị n'efu ma dịkwa maka akwalite profaịlụ gị dị ka onye na-esote mba ụwa. Dabere na ndị ọbịa anyị site na Google. Anyị nwere ike ịsị na ndị na-achọ ọrụ. N'ikwu okwu n'ozuzu, ịchọta ohere ọhụụ. N'ezie, ịkwesịrị ịkwaga ịnyịnya ibu gị. Ma na nloghachi, ị ga-enwe ohere ịchọta ọrụ na UAE. Naanị site n'izi ozi na ekwentị mkpanaaka.
Soro WhatsApp Group maka ọrụ na Dubai wee bido ịchọ ọrụ na UAE. Tinye nkọwa gị na Otu WhatsApp, ohere ọrụ na United Arab Emirates Jiri ekwentị were n'ọrụ. Onye ozi Whatsapp dị ka ngwa ọrụ maka ọrụ na UAE. Whatsapp maka windo Sure, ị ga-enwe ndị ga - enyere gị aka n'ụzọ. Employmentchọ ọrụ nke ọma na Middle East adịghị mfe. Mana iso ụlọ ọrụ anyị ma ọ dịkarịa ala batara ndị na-akpọtụ akwụkwọ ka ha nyere gị aka ịchọta ọrụ.
Enwere ọtụtụ ebe ọrụ mana naanị ụlọ ọrụ Dubai City na-ahụ maka enyemaka ọrụ WhatsApp. N'isonyere ndị otu WhatsApp ọ dị mfe. Otu Pịa ma ị nwere ike imelite ndị na - ewe ndị ọrụ. Na ị dịla njikere ịkwaga UAE. Jikọọ Ahịa Group maka Ọrụ na Dubai !. Ndị otu anyị ga- enyere gị aka ịbanye na Dubai.
Jikọọ Ọrụ mba ofesi obodo
Nyochaa ndi choro ndi choro. Karịsịa ndị si n'Ọdị Mmiri Gulf. Anyị nọ ebe a iji nyere gị aka iru mba ụwa maka ọrụ. Biko sonye na Group Whatsapp maka ụlọ ọrụ nkwari akụ ọrụ ohere. Anyị nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na 2018 na 2019. Ọzọkwa, ndị na - ewe aha ndị na-achọ ndị chọrọ ohere mmanụ na Gas. Iji njikọ otu ọrụ WhatsApp anyị.
Anyị nọ ebe a iji nyere onye ọ bụla anyị nwere ike aka. Ebumnuche ọrụ anyị bụkwa enyere gị aka iru ndị ọrụ nchịkọta maka IT. N'akuku ya na ndi ahia na ndi oru ahia. Ndị ọbịbịa kwesịrị ịrụ ọrụ iji wuo ụlọ ọrụ Dubai nke ụlọ ọrụ na-emepụta ọrụ iji mee ka mmelite ọrụ. Isi ihe ọzọ mgbe ị na-eso WhatsApp Group. Ị ga-enwe ike igosi na ịchọrọ ịchọta ọrụ na Mumbai.
Ọhụrụ gụsịrị akwụkwọ pụkwara ịchọta nrọ nrọ
Anyị na-enwe ụfọdụ n'ime ndị ahịa zuru ụwa ọnụ. Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị na-akwụ ụgwọ na-eziga mgbasa ozi. Ha nile choro imeghari ohuru ndị na-achọ ọrụ na mba ụwa maka ụlọ akụ na Dubai. Ọzọkwa, ha chọrọ ịkpọtarịrị ndị chọrọ na-arụ ọrụ ná mba ọzọ na Dubai. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-achọ ọrụ ụwa. Na ị na-achọ ịgbanwe ndụ gị. Enwere ike itinye gị maka ụwa arụ ọrụ na ọbụna Google na Dubai. Ụmụ akwụkwọ MBA ọhụrụ gụsịrị akwụkwọ nwere ike isonyere ozugbo.
Jikọọ Ahịa Group maka Ọrụ na Dubai !. Taa ma ghọọ mba mba ọzọ.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ ugbu a n'India ma na-achọ ịkwaga Dubai. Ụlọ ọrụ a bụ maka gị. Anyị na-etinye ndị mmadụ site na nwata n'ogologo ogo ka ha nwee ohere nrọ na UAE. Ị nwere ike ịchọ ngalaba ọ bụla dịka mmepụta ohere na Dubai. Ụdị nke a ọrụ dị mfe ịchọta.
Bụrụ ọkachamara n'ịchọ ọrụ na Dubai
Otú ọ dị, ohere mba ndị ọzọ na-arụ ọrụ n'ụwa na ọnọdụ ha. Nwere ike iwe oge. N'aka nke ọzọ, otu ọrụ anyị na-arụ ọrụ nke ọma na-enyere gị aka na R & D n'èzí, n'ọdụ ụgbọ mmiri dị ka a onye na-achọta ọrụ na Dubai. Ịnwere ike ọbụna ịrụ ọrụ maka ahịa & ahia na ọnọdụ nchekwa. Kwuo nkọwa gị na ndị na-achọ ọrụ dị iche iche na-achọgharị ohere. Bulite nọmba mkpanaka gị maka ọrụ nrọ na UAE. Ị bụ otu ụzọ wepụ maka ịbanye ụlọ ahịa Dubai Dubai ọrụ ohere otu maka Pakistani.
Na-atụ anya na ọ ga-abụ ụbọchị chi ọma ma ị ga-esonyere ndị otu WhatsApp. Na-ekwukarị, a ga-etinye gị n'ìgwè ahụ ma tinye gị maka ugwo ugwo ugwo na UAE. N'aka nke ọzọ, ngalaba ọrụ anyị ga-enyocha ọrụ profaịlụ gị. Ndị isi ụlọ ọrụ nke anyị na-ahụ maka njikwa na-akpọtụrụ gị maka ọrụ. Anyị bụkwa enyere ndị Pakistani aka ịchọta ọrụ na Emirates. Dị ka eziokwu, bịakwute ndị nnọchianya anyị na ụlọ ọrụ ma gaa isi obodo nke UAE.
The Ọrụ na Dubai ọ bụ banyere ndụ nrọ na n'aka nke ọzọ i nwekwara ike inweta ya. Ogologo oge mkpa gị maka nke ahụ dị oke njọ iji gbalịsie ike ịchọta ya na ịgafe Interview. Omume ndụ ndụ karịrị nke a ma ama. Ụgbọ ala ndị nwere ọnụ ahịa na nnukwu ndị na-enyere aka na-akpali ndị ọbịa ọhụrụ. Karịsịa ndị ahụ ga-achọ ịnọ na United Arab Emirates.
Ihe kacha njọ mgbe ị na-anakọtara bụ ịgafe ajụjụ ọnụ jiri nke a n'uche gbalịa ịmatakwu. Karịsịa maka usoro Interview ọhụrụ. Otu esi ejikwa ọnọdụ uche gị. Na-achọ ihe ọmụma zuru ezu gbasara ohere na ọrụ ụlọ ọrụ. Karịsịa ndị a na ije-na nyocha. Ha dị oke ezi maka ndi ichu nta.
Kedu ihe kpatara ị ga - eji họrọ nke a Dubai City Gburugburu?
N'ime iri afọ gara aga, Dubai erutela aha ebe nrọ akụ na ụba dị. Ihe karịrị ogo 70,000 nke ụlọ ọhụụ na oru ngo. N’eme obodo anyi bu ihe nlere ndi nleru anya n’uwa n’uwa nile. Enwere ọtụtụ ihe kpatara ị ga-eji lelee Dubai dị ka ezumike gị ma ọ bụ ebe ọrụ gị. Agbanyeghị, ọtụtụ n'ime anyị ndị ọbịa na-eji ụlọ ahịa Dubai City n'ihi na anyị nwere ike inye gị a ọrụ na-enyere aka.
Kapitol nke UAE bụ nnukwu ụlọ ọrụ azụmahịa e-commerce na mpaghara mpaghara mpaghara Gulf. N'ezie, ọ gaghị abụ echiche nkata ịsị na Dubai bụ nrọ ọlaedo nke ndị Emọd. N'ihi na ebe a Inwere ike isi igwe igwe igwe ego zụta ọla edo. Goolu di nkpa n’ihi na inwere ike inweta ya n’igwe komputa di na Hotel Hotel n’ime ihe obula n’ebe Abu Dhabi. Isi ihe ọzọ nwere igwe igwe ọla edo ATM bụ na ahịa ahịa na-emelite ọnụahịa ọla edo kwa nkeji 10. Nbudata ozi sitere na ahịa ego. Ha iji dakọrita mba smart obodo ahịa.
Ọbụna na nke ahụ, ị ​​ga-enwe ike ịme ego n'ime obodo. Dị ka ihe atụ nke ndị Arab, onye ọ bụla ọhụụ ọhụrụ kwesịrị inweta ahụmahụ ahụ. Ọ bụrụ na ị na-agbatị maka ezumike ọzọ gị, ebe a bụ isi ihe kpatara ya kedu ihe mere ị ga - eji jide Dubai iji nwee ahụmahụ na-enweghị ncheta.
Kedu ihe kpatara mmalite ọrụ na Middle East?
Ọ dị mma, ị maara ihe niile gbasara WhatsApp ziri ezi? Ma ihe mere o ji dị ezigbo mkpa iji nwalee ebe ndịda Middle East?. Middle East, ya na Qatar na Saudi Arabia, bụ ebe a pụrụ ịdabere na ya maka ndị na-achọ ọrụ zuru ụwa ọnụ. Karịsịa maka ndị ọhụrụ gụsịrị akwụkwọ na-achọ ịmalite ndụ dị elu dị elu. Dịka ọmụmaatụ, ka ị na-agụ na mahadum, itinye akwụkwọ bụ ogologo ụzọ dị n'ihu.
Ma ebe ọ bụ na ị na-agụ akwụkwọ. Ọ bụghị ụmụ akwụkwọ ọ bụla na-arọ nrọ malite ọrụ dịka onye nkuzi na Dubai ma ọ bụ Abu Dhabi. Dịka ọmụmaatụ, ọ dị ole na ole legit ndị na-enyocha ndị na-enye ndị isi ọrụ maka ndị ọrụ ụwa. Dịka ọmụmaatụ, Gọọmentị nke ụlọ ọrụ Abu Dhabi choro ndi oru aka. Ndị gụrụ ezigbo akwụkwọ na ọtụtụ nhụjuanya n'ọtụtụ mpaghara.
N'aka nke ọzọ ọtụtụ n'ime nrọ nke onye mmụta ahụ na-arụ ọrụ na Ferrari. N'ikwu eziokwu, ọ bụghị ọrụ ọ bụla na-enyere ha aka ịnweta ohere dị mma a kwụrụ ụgwọ nke ọma na ahịa ahịa. N'ebe na-adịghị mma, ọrụ nlekọta ụlọ ọrụ anaghị akwụ ụgwọ onye ọ bụla. Ọbụna ị nwere ike iji ya na nzukọ ndị ọzọ na-akwado ya.
Ọbụlagodi na ha na-ewe ndị na-ebuso ndị ọrụ ọrụ ọrụ. Ha nwekwara ọgbakọ ọhụrụ iji were ndị ọrụ obodo. Maka ibelata ego maka mbufe ndị ọhụrụ na ụlọ ọrụ ha. N’okpuru ọnọdụ ndị ahụ, ndị ahịa anyị na-akpọta ndị ọrụ zụrụ azụ. N'akụkụ na-adịghị mma, to ruo n’ahịa azụmaahịa Middle East ịkwesịrị inwe ahụmịhe na ọrụ dị iche iche. O yikarịrị ka ọ ga-eji ya Ph.D. ma ọ bụ MBA agụmakwụkwọ ọrụ. Ndị kasị mma maka ịrụ ọrụ UAE bụ Europe ma ọ bụ US educa ọ bụlaMa ọ bụ ihe kachasị mma nke ga - enyere gị aka inweta ala ọhụrụ ahụ sitere na Europe.
Ke akpatre maka WhatsApp Dubai
Na nyocha nke ikpeazụ maka ebumnuche mbanye ọrụ Dubai na Abu Dhabi. Biko kọọrọ onwe gị echiche. Gị akwukwo ndụmọdụs inyere ndị ọzọ aka. Na-enwe olile anya na ụlọ ọrụ anyị ga-enwe ike iru ihe mgbaru ọsọ maka ndị na-achọ ọrụ na UAE na Linkedin. Citylọ ọrụ Dubai City na-enwe obi ụtọ mgbe niile mgbe ndị ọbịa ọhụrụ anyị na-ezigharị ịmalite. Anyị na na-anwa inye aka n ’oge n’ikpeazụ.
Ihe ọ bụla ọ bụla ga - edebanye aha ndị na - achọ ọrụ bụ ndị dị njikere gaa na onye ndu anyị. Ọ na-enwe ike ịkekọrịta ọrụ ọrụ dị ka amawororịrị ama. Ma dị ka ọdịnaya anyị na Facebook na Linkedin. Egbula oge gị ma sonye na Group Group Ọrụ na Dubai. N'ikpeazụ, ọ bara uru.
WhatsApp bụ naanị ngwaọrụ maka ịchọta ọrụ. Shouldkwesịrị iji ya jiri amamihe na nkwanye ugwu nye ndị kere ha. Na ụzọ ọ bụla, ahụmịhe ọkachamara gị ga-eme enyere gị aka ịmalite ọrụ. Agụmakwụkwọ gị na ọrụ gị na-arụ ọrụ dị mkpa. Ma ọ bụrụ na ị na-ewere otu mgbe. Kwesịrị inwe onye ọrụ aka ọrụ. Ọ bụrụ n’uche na ị bụ otu n’ime ha. Bulite ọkachamara gị malitegharịa na ụlọ ọrụ anyị. Na chere maka ime anwansi.
N'okpuru ọnọdụ ndị a, onye ọ bụla nọ na Middle East. N'ikwu okwu n'ozuzu, choro ịchọta a Job na Dubai obi ụtọ anyị nọ ebe a !.
Soro ndi oru nyocha oru kacha mma n'UAE. Ekem biko Bulite Na-amalite gaa Obodo Na-arịwanye Elu na Ụwa !.
Jikọọ Ahịa Group maka Ọrụ na Dubai, Ọrụ, Na-achọ na UAE.